Mutungamiri weMDC Alliance, VaNelson Chamisa
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance, VaNelson Chamisa, vanoti havasi kuzomira kuita misangano yavo nevatsigiri vavo kunyange hazvo vari kuti vakaridzirwa pfuti nemusi weChipiri kwaMutare nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu-PF.
VaChamisa vari kuManicaland pari zvino uye vadzokorora mashoko avo ekuti kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mhirizhonga, United Nations inofanirwa kupindira.
VaChamisa vakasangana neMhirizhonga zvakare kuMasvingo apo vaisangana nevatsigiri vebato ravo. Zvichitevera mhirizhonga iyi, nhengo huru yeZanu PF, VaPatrick Chinamasa, vakati VaChamisa vakasangana nemhirizhonga iyi nekuti vaimanikidza vanhu vekuMasvingo kuti vasangane navo.
Asi VaChamisa vaive muMasvingo vachisangana nevatsigiri vavo, kwete vatsigiri veZanu PF.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika, VaKazembe Kazembe, kana mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyathi, sezvo vaviri ava vange vasiri kudaira nharembozha dzavo.
Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZanu-PF, VaTafadzwa Mugwadi, vakaudza Studio 7 neChipiri kuti bato reMDC Alliance riri kunyepera kuti munyika mune mhirizhonga nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika sezvo munyika muine nhumwa yeUnited Nations iri kuongorora nyaya dzezvirango pamwe nekodzero dzevanhu.
Zvichakadaro, bato reZanu-PF neChitatu rakaita musangano waro wePolitburo muHarare nhasi mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vachiudza vatori venhau kuti budiriro yenyika iri mugwara.
Asi vati zvakakosha kuti bato ravo ritsanangurire vanhu zvose zvarakwanisa kuita nezvariri kuyedza kuita.
Vati musangano wePolitburo uyu wauyawo panguva iyo hurumende yasimbaradza kushanda neSADC muchirongwa chezuva rekuratidzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe unova musi wa 25 Gumiguru.
Asi vakatemera zvirango izvi vanosanganisira America, Britain nenyika dziri mugungano reEuropean Union vanoti zvakatemerwa vashoma vanotyora kodzero dzevanhu nekuita huori.